UFrescobaldi, umhleli womculo weLilyPond ofumaneka ku-Ubuntu | ubunlog
UFrescobaldi, umhleli womculo weLilyPond ofumaneka ku-Ubuntu
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga kwiFrescobaldi. Yi le umhleli wombhalo womculo weshiti ILilyPond. Injongo yayo kukuba namandla, ngelixa izama ukukhanya kwaye kulula ukuyisebenzisa. IFrescobaldi yiSoftware yasimahla, kwaye ifumaneka simahla phantsi kweLayisensi yoLuntu ngokubanzi.
Inkqubo yile yenzelwe ukusebenza kuzo zonke iinkqubo zokusebenza ezinkulu, Gnu/Linux, Mac OS X kunye ne-MS Windows. Igama lale nkqubo livela ku-Girolamo Frescobaldi (1583-1643), ongumqambi waseTaliyane womculo wekhibhodi, i-Renaissance kade kunye neBaroque yokuqala.
IFrescobaldi inonxibelelwano lwangoku lomsebenzisi olunemibala eqwalaselweyo, iifonti kunye neendlela ezimfutshane zebhodibhodi, nayo iya kusivumela ukuba sisebenzise iinguqulelo ezininzi zeLilyPond, ukukhetha ngokuzenzekelayo uguqulelo olululo.
1 Iimpawu eziqhelekileyo zeFrescobaldi
2 Faka iFrescobaldi Music Editor ku-Ubuntu
2.1 Kunye APT
Iimpawu eziqhelekileyo zeFrescobaldi
Inkqubo ine umhleli wokubhaliweyo ngophawulo lwesivakalisi kunye nokugqibezela okuzenzekelayo.
Ikwabonelela nge- imboniselo yomculo ngeNqaku & Cofa phambili.
Enye into ekhoyo yi Umdlali we-MIDI ukumamela iifayile ze-MIDI ezenziwe nguLilyPond.
Sinako thatha ukubanjwa kwe-MIDI yokufakwa komculo.
Akhawunti SnippetManager, ekuvumela ukuba ugcine kwaye usebenzise amaqhekeza, itemplates okanye izikripthi.
Siza kusinika i kungenzeka ukusebenzisa iinguqulelo ezininzi zeLilyPond, ukukhetha ngokuzenzekelayo uguqulelo olululo.
Inefayile ye- Isikhangeli seLilyPond esiDityanisiweyo kunye neSikhokelo soMsebenzisi.
unamandla umncedisi womculo weshiti ukuseta ngokukhawuleza amanqaku omculo.
Akhawunti Iimpawu zolawulo lwe-smart layout, njengokufaka imibala kwizinto ezithile kwiPDF.
Kwakhona siya kuba nokwenzeka Ukungeniswa kweMusicXML, iMidi kunye neABC.
I-interface yomsebenzisi yeyangoku, ngemibala eqwalaselweyo, iifonti kunye neendlela ezimfutshane zebhodi yezitshixo.
Inkqubo ibikho iguqulelwe kwezi lwimi zilandelayo: IsiDatshi, isiNgesi, isiFrentshi, isiJamani, isiTaliyane, isiCzech, isiRashiya, iSpanish, isiGalician, isiTurkey, isiPolish, isiPhuthukezi saseBrazil kunye nesiUkraine.
Ungawutshintsha umculo ukusuka kwisihlobo ukuya kwinto epheleleyo kwaye ngokuchaseneyo. Kwakhona kuya kusivumela tshintsha ulwimi olusetyenziselwa amanqaku amagama kunye nesingqisho (songa, hafu, dibanisa/susa amanqaku, khuphela, ncamathelisa), njl
Siya kuba nethuba lokongeza izitshixo, iintshukumo kunye nokucacisa ngokulula, usebenzisa iphaneli yokufaka ekhawulezayo.
Iya kusinika ithuba lokuba hlaziya i-syntax ye-LilyPond usebenzisa i-converter-ly.
Faka iFrescobaldi Music Editor ku-Ubuntu
Unikezelo oluninzi lweGnu/Linux luneFrescobaldi kumphathi wabo wepakethe. Kuninzi lonikezelo olusekwe kwiDebian, le nkqubo, inguqulo 3.0.0, inokufakwa ngokuvula i-terminal (Ctrl+Alt+T) kunye nokusebenzisa umyalelo:
Lo myalelo kufuneka ube ngokwaneleyo ukufaka iFrescobaldi kunye nokuxhomekeka kwayo. Nje ukuba inkqubo ifakiwe, unako qala ukukhangela umqalisi kwiqela lethu.
Ukuba ufuna susa inkqubo efakiweyo nge-APT, kuyimfuneko kuphela ukuvula i-terminal (Ctrl+Alt+T) kwaye uphumeze kuyo:
ukuba faka Frescobaldi 3.1.3 nge Flatpak, kuyimfuneko ukuba nenkxaso kule teknoloji kwinkqubo yethu. Ukuba usebenzisa Ubuntu 20.04 kwaye awukabi nayo, ungalandela Isikhokelo ukuba ugxa wabhala le blog kwithuba elidlulileyo.
Xa sele ukwazi ukufaka olu hlobo lweepakethe kwindlela yakho, kuyimfuneko kuphela ukuvula i-terminal (Ctrl+Alt+T) kwaye wenze umyalelo kuyo:
Ukuba kukho inguqulelo entsha ekhoyo, le nkqubo inokuhlaziywa ukuchwetheza:
Ekupheleni kofakelo, xa ufuna ukuqalisa inkqubo, unako khangela umqalisi kwikhompyuter yakho, okanye uchwetheze kwi-terminal:
Kwimeko apho ufuna khipha inkquboKuya kufuneka uvule i-terminal (Ctrl + Alt + T) kwaye uchwetheze lo myalelo:
Kubasebenzisi abanomdla wokwazi ngakumbi malunga nendlela yokusebenzisa inkqubo, banokuya kwi maxwebhu enikezelwa kwiwebhusayithi yeprojekthi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: ubunlog » Ubuntu » UFrescobaldi, umhleli womculo weLilyPond ofumaneka ku-Ubuntu
I-GNOME 42 iya kuba yinguqulelo eneyona ngqukuva ijikelezileyo yamva nje
Inguqulelo ezinzileyo yeWine 7.0 sele ikhutshiwe kwaye ezi ziindaba zayo